दशैंको टिका लगाउँदा कुन दिशा फर्केर लगाउनु उत्तम ? - Gulminews
२०७८ आश्विन २८, ००:०८
काठमाडौं, असौज २८ । दुर्गापक्षको मुख्य दिन भोली विजयादशमी मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाएर मनाइँदैछ ।
आश्विन शुक्ल दशमीका दिनमा मनाइने विजयादशमी पर्व भोली शुक्रबार हर्षोल्लासका साथ मान्यजनबाट दुर्गाभवानीको प्रसादस्वरुप टीका र जमरा थापेर मनाइन्छ ।
विजया दशमीका दिन शुक्रबार १० बजेर ०२ मिनेटमा टीका ग्रहण गर्ने उत्तम साइत रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
यो पनि हेर्नुस्: दशैंको टीकाको उत्तम साइत कुन देशमा कति बजे ? हेर्नुस् यस्तो छ स्थानिय समयको सुची